UV100 Portable Mini Handheld Small LED UVC Jiro Jiro UV Sterilizer Wand
Fanatanjahantena fanatanjahan-tena mihosin-jiro elektrika fanatanjahan-tena fanorana Yoga
Novel Coronavirus (COVID-19) Antibody IgM, Kit Kitapo IgG
Fotoana fanehoan-kevitra: 315 minitra
Fomba fanaovana santionana amin'ny rà: ra peripheral na ra lalan-drà
Saron'ny kiraro fanokanana medikaly fanary
[Famaritana modely] S (mety amin'ny kiraro manana habe 20 ka hatramin'ny 25), M (mety amin'ny kiraro misy habe 26 ka hatramin'ny 30), X (mety amin'ny kiraro 31 hatramin'ny 35), L (mety amin'ny kiraro manana habe 36 ka hatramin'ny 40), XL ( mety amin'ny kiraro avy amin'ny habe 41 ka hatramin'ny 45), 2XL (kiraro avy amin'ny habe 46 ka hatramin'ny 50).
[Mombamomba ny vokatra] Izy io dia vita amin'ny fitaovana mety miaraka amin'ny tanjaka sy ny sakana ampy. Nanome tsy misy steril.
[Fampiasana fanahy iniana] Nampiasain'ny mpiasa ara-pitsaboana tany amin'ny toeram-pitsaboana mba hisorohana ny fifandraisany amin'ny ra marary, tsiranoka amin'ny vatana, tsiambaratelo sns., Ary mitana andraikitra manakana sy miaro.
[Fampiasana] Apetaho amin'ny tanana mivantana ny tanany.
Solomaso fiarovana voaaro amin'ny maso miaro amin'ny maso miaro amin'ny zavona
Ny solomaso fiarovana ara-pahasalamana dia afaka misoroka fanafody na ra tsy hikorontana amin'ny tarehy, amin'izay dia miaro ny maso. Ity karazana solomaso ity dia matetika ampiasaina miaraka amin'ny sarontava sy satroka fandidiana mba hiarovana tanteraka ny lohan'ny dokotera.
Saron-tarehy miady amin'ny zavona manohitra ny zavona
Ny lambam-baravarana tarehy dia misy vokany miaro azy, ny tena zava-dehibe dia ny fanakanana ny tsiranoka amin'ny vatana, ny fisidinan'ny rà na ny famafazana. Matetika izy io dia rakotra fonosana miaro vita amin'ny akora polymer, tadin'ny foam ary fitaovana fanamboarana. Famatsiam-bola tsy mandeha amin'ny laoniny, fampiasana tokana.
Ny kapitalintsika dia voakapaina ary nozairina tamin'ny lamba tsy tenona ho toy ny akora fototra, ary omena tsy steril raha ampiasaina indray mandeha. Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny fitokana-monina ankapobeny any amin'ny tobim-pitsaboana, paroasy ary efitrano fizaham-pitsaboana any amin'ny toeram-pitsaboana.
Misafidiana satroka habe mety, izay tokony hanarona tanteraka ny volo amin'ny loha sy ny fehim-bolo, ary tokony hisy fatorana mihamafy na fehikibo vita amin'ny elatry ny satroka mba hisorohana ny volo tsy hiparitaka mandritra ny fandidiana. Ho an'ireo manana volo lava kokoa, afatory ny volony alohan'ny hametrahana ny satrony ary aforeto ao anaty satroka ny volo. Ny tendrony nikatona ny satrony ara-pitsaboana dia tsy maintsy apetraka amin'ny sofina roa, ary apetraka amin'ny handrina na amin'ny faritra hafa dia tsy avela.